ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင် အခန်းထဲမှာ စောင့်ဖမ်းလိုက်တဲ့မန္တလေးက လူကြားမကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ် - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ဖြစ်ရပ်မှန် / ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင် အခန်းထဲမှာ စောင့်ဖမ်းလိုက်တဲ့မန္တလေးက လူကြားမကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင် အခန်းထဲမှာ စောင့်ဖမ်းလိုက်တဲ့မန္တလေးက လူကြားမကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်
Apann Pyay 10:39 AM ပြည်တွင်းသတင်း , ဖြစ်ရပ်မှန် Edit
မန္တလေး ၃၁လမ်း၊ ၆၄× ၆၅ လမ်းကြားမှာ ဖမ်းမိတဲ့ အတွဲပါ။နှစ်ဦးလုံး အိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ ဖောက်ပြန်ကြတာပါ။ အမျိုးသမီးဖြစ်သူရဲ့ လင်သားကိုယ်တိုင် စောင့်ဖမ်းတာပါ။ ၁. ၁၀.၂၀၁၆ ရက်နေ့ကလည်း BOB KTV အလုံခန်းထဲမှာ ချိန်းတွေ့ကြပါသေးတယ်။ လင်ကိုယ်တိုင် လိုက်ချောင်းပေမယ့် ရဲစခန်းမှာ အမှုမဖွင့်ရသေးလို့ ရဲက လိုက်ဖမ်းမပေးနိုင်တာပါ။ အခုတော့ ဖောက်ပြန်သူ နှစ်ဦးလုံး အမှတ် ၃ စခန်းရောက်နေပါပြီ။ အမျိုးသမီးဖောက်ပြန်တာက ကြာပါပြီ။ ကလေးနှစ်ယောက် မျက်နှာနဲ့မို့ မကွာရက်တာပါ။ ရပ်တန့်ဖို့ပြောလည်း လက်မခံပါဘူး။ ဖုန်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး ချိန်းတွေ့ကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ ခါတိုင်း လပြည့်လကွယ် အိမ်မှာ မိခင်ကြီးမရှိချိန်မှ ဟိုတယ်၊ ကေတီဗီတွေမှာ ချိန်းတွေ့ကြတာပါ။ ဒီနေ့တော့ လပြည့်နေ့အထိ မအောင့်နိုင်ကြတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယ်။ အခုဖမ်းမိတဲ့လူအပြင် အခြား သုံးယောက်နဲ့လည်းတွဲဖူးတယ်လို့ လင်ဖြစ်သူက အခိုင်အမာဆိုနေပါတယ်။ သူမသိသေးတာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်လို့ ခန့်မှန်းနေပါတယ်။ အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ လွယ်ကူနေတာပေါ့။ fb. vb. . . . . . . စုံနေတာပဲလေ။ အိမ်ထောင်မရှိသယောင် ချိန်းချက်လို့ရနေတာပဲ။ ဆေးတွေ နည်းတွေကလည်း ပေါတော့ အရင်လို အကြောက်တရားလည်း မရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ စိတ်ဆန္ဒကို ဦးစားပေးကြတော့ လူတွေလည်း လူနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ တော်သလင်းနွယ် သတ္တဝါတွေလို ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။ စောင့်စည်းကြပါဗျာ။ အိုင်တွေကလည်း မပြောင်းကြပါနဲ့။ ခြေတွေကလည်း အိုင်လိုက်မရှာကြပါနဲ့။ အပူရှပ်တတ်။ အအေးပက်တတ်လို့ပါ။
မန်တလေး ၃၁လမျး၊ ၆၄× ၆၅ လမျးကွားမှာ ဖမျးမိတဲ့ အတှဲပါ။နှဈဦးလုံး အိမျထောငျရှိလကျြနဲ့ ဖောကျပွနျကွတာပါ။ အမြိုးသမီးဖွဈသူရဲ့ လငျသားကိုယျတိုငျ စောငျ့ဖမျးတာပါ။ ၁. ၁၀.၂၀၁၆ ရကျနကေ့လညျး BOB KTV အလုံခနျးထဲမှာ ခြိနျးတှကွေ့ပါသေးတယျ။ လငျကိုယျတိုငျ လိုကျခြောငျးပမေယျ့ ရဲစခနျးမှာ အမှုမဖှငျ့ရသေးလို့ ရဲက လိုကျဖမျးမပေးနိုငျတာပါ။ အခုတော့ ဖောကျပွနျသူ နှဈဦးလုံး အမှတျ ၃ စခနျးရောကျနပေါပွီ။ အမြိုးသမီးဖောကျပွနျတာက ကွာပါပွီ။ ကလေးနှဈယောကျ မကျြနှာနဲ့မို့ မကှာရကျတာပါ။ ရပျတနျ့ဖို့ပွောလညျး လကျမခံပါဘူး။ ဖုနျးနဲ့အဆကျအသှယျလုပျပွီး ခြိနျးတှကွေ့တာလို့ဆိုပါတယျ။ ခါတိုငျး လပွညျ့လကှယျ အိမျမှာ မိခငျကွီးမရှိခြိနျမှ ဟိုတယျ၊ ကတေီဗီတှမှော ခြိနျးတှကွေ့တာပါ။ ဒီနတေ့ော့ လပွညျ့နအေ့ထိ မအောငျ့နိုငျကွတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယျ။ အခုဖမျးမိတဲ့လူအပွငျ အခွား သုံးယောကျနဲ့လညျးတှဲဖူးတယျလို့ လငျဖွဈသူက အခိုငျအမာဆိုနပေါတယျ။ သူမသိသေးတာလညျးရှိနိုငျသေးတယျလို့ ခနျ့မှနျးနပေါတယျ။ အငျတာနကျခတျေဆိုတော့ လှယျကူနတောပေါ့။ fb. vb. . . . . . . စုံနတောပဲလေ။ အိမျထောငျမရှိသယောငျ ခြိနျးခကျြလို့ရနတောပဲ။ ဆေးတှေ နညျးတှကေလညျး ပေါတော့ အရငျလို အကွောကျတရားလညျး မရှိနိုငျတော့ဘူးပေါ့။ စိတျဆန်ဒကို ဦးစားပေးကွတော့ လူတှလေညျး လူနဲ့မတူတော့ပါဘူး။ တျောသလငျးနှယျ သတ်တဝါတှလေို ဖွဈကုနျကွပါပွီ။ စောငျ့စညျးကွပါဗြာ။ အိုငျတှကေလညျး မပွောငျးကွပါနဲ့။ ခွတှေကေလညျး အိုငျလိုကျမရှာကွပါနဲ့။ အပူရှပျတတျ။ အအေးပကျတတျလို့ပါ။